Caga-lule wuxuu ku kacay waxa ka dambaysay oo si qayaxan u abaabulaysay maamul-goboleedka Puntland”Prof Cali khaliif. | BuhodlePost.com
Caga-lule wuxuu ku kacay waxa ka dambaysay oo si qayaxan u abaabulaysay maamul-goboleedka Puntland”Prof Cali khaliif.
Aug 5, 2017 - jawaab
Caga-lule wuxuu ku kacay waxa ka dambaysay oo si qayaxan u abaabulaysay maamul-goboleedka Puntland”
By: Khadar M. Xaashi
Buuhoodle (Bpost)- Madaxweynaha maamulka Khaatumo, Prof. Cali Khaliif Galaydh, ayaa ka hadlay tallaabada ay xilalkii kaga qaadeen Ku-xigeenkiisii Cabdalle Maxamuud Cali (Caga-lule) iyo afar xubnood oo kale, waxaanu ku dooday inay ka soo horjeesteen wadahadalka Somaliland ay kula jiraan oo hore maamulkoodu iskugu raacay inay wadaxaajoodkaas galaan.
Waxa ka mid ah qodobbada loo cuskaday xilka qaadista Cagolule, inuu magaaladda Muqdisho shirar kula galay madaxda dawladda Soomaaliya oo lagaga soo hor jeedo wada hadalka u socda Somaliland iyo maamulka Khaatumo.
Madaxweynaha maamulka Khaatumo Prof. Cali Khaliif Galaydh, oo faahfaahin ka bixinayay sababta ay baarlamaanku xilka uga qaadeen madaxweyne ku-xigeenkiisii hore waxa uu yidhi “Madaxweyne ku-xigeenkii hore ee Khaatumo Cabdalle Maxamuud Cali (Cagallule) oo la doortay 2014-kii, oo markii hore-ba baarlamaanku u arkayay madaxweye ku-xigeenku inuu hawlihiisa gudan waayay. Laakiin, markan ugu danbaysay waxaa dhacday hawl lagu ogaa oo uu ku maqnaana aanay jirin, dhawr bilood oo ugu danbeeyay waxaa uu joogay Nairobi iyo Xamar oo ay ka socdeen shirar lagaga soo horjeedo Khaatumo, laguna diidanaa wada hadalada Somaliland iyo Khaatumo oo anaga qiimo weyn noogu fadhiya. Taasina ay keentay in baarlamaanku ay ka shiraan dacwad-na lagu soo oogay in aanu xilkiisii gudanaynin, si qayaxana uga soo hor jeedo wada hadaladda Khaatumo iyo Somaliland.”
“Xildhibaannada baarlamaanka tiradoodu waa 32 way maqnaayeen dhawr xildhibaan, inkastoo bishan 1-deedii la furayo qorshahan madaxweyne ku-xigeenku waday ayaa ahayd in ay ka soo horjeestaan maamulkan.Waxaanu bilaabay in uu hungureeyo xildhibaaannada, shacabkii oo uu kiciyay oo shir isugu yeedhay waxaa uu ka hadlayayna waxay noogu muuqatay mida Xamar ay ka soo sheegayeen,” ayuu yidhi Cali Khaliif oo shalay u waramayay BBC isagoo ku sugan Buuhoodle.
Waxa kaloo uu ku eedeeyay maamul goboleedka Puntland in uu qayb ka ahaa shirqoolka la doonayay in Buuhoodle lagaga dhawaaqo maamul cusub, isla markaana ay abaabushay shirarkii Muqdisho ku dhexmaray xubnaha Khaatumo ka socday iyo madaxda dawladda federaalka Soomaaliya, waxaannu yidhi; “Arrimahan Cagalule ku kacay Puntland ayaa ka danbaysay. Waxaana arrinkan isku duba ridayay shirarkana abaabulayay oo si qayaxan u abaabulayay maamul goboleedka Puntland iyo dad ay u adeegsatay.
Shirarku-na sidaasi ayay ku dhaceen cida balamaha ka qabanaysay dawlada dhexe ee federaalka Puntland ayay ahayd.”